Dagaal Khasaare Xoog Leh Geystay Oo Alshabaab Xalay Ku Qaadeen Degmada Mahdaay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Dagaal Khasaare Xoog Leh Geystay Oo Alshabaab Xalay Ku Qaadeen Degmada Mahdaay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal Khasaare Xoog Leh Geystay Oo Alshabaab Xalay Ku Qaadeen Degmada Mahdaay
By A warsame on 15th January 2014
Mahadaay, Mareeg.com: Alshabaab ayaa xalay dagaal xoog leh ku qaaday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sida ay Mareeg Media u sheegeen goojogayaal ku sugan Mahadaay, Alshabaab ayaa weerarka ku bilaabay deegaanka Buuraane oo dhanka Jowhar 3 KM kaga beegan Mahadaay, halkaasoo ah jidka ay ku baxsan lahaayeen ciidamada dowladda hadii ay la kulmaan culeys dagaal.
Bog Alshababaab taageera ayaa lagu qoray in ciidamada Alshabaab Mahadaay weerar ku galeen xilli ciidamada dowladda Soomaaliya u fadhiyeen cunista maandooriuyaha qaadka.
Dagaalka xalay dhacay ayaa khasaare xoog leh u geystay ciidamada dowladda Soomaaliya, iyadoo dhowrs askari laga dilay oo mid ka mid ah qoorta laga jaray, gaadiid laga gubay, gaad kalana laga qaatay, islamarkaana laga rartay saad yallay Mahadaay.
Alshabaab ayaa saacado gacanta ku dhigay Deegaanka Buurane iyo degmada Mahadaay, waxaana askarta la dilay gaarayaan ilaa 5 askari, waxeyna ciidamada dowladdu u baxeen dhulka howdka ah.
Waxaa sidoo kale, dagaalkii xalay ka dahcay Mahadaay khasaare kasoo gaaray dadka shacabka, iyadoo la sheegayo in dhowr qof dhaawacyo gaareen kadib markii guryahooda rasaas ugu tagtay.
Sidoo kale, Alshabaab gubay gaari ay leeyihiin ciidamada dowladda, waxeyna horay u kaxeysteen labo kale oo ah gaadiidka dagaalka, iyagoo deegaanka Buurane ka rartay raashin ciidamada u yaallay.
Sida wararku sheegayan, baabuur uu lahaa guddoomiyaha degmada Mahaday ayaa ka mid ah gaadiidka Alshabaab ka qaateen Maahaaday, hase ahaatee guddoomiyaha ayaa ka badbaaday weerarka.
Alshabaab ayaa isaga baxay salaadii subax ka hor degmada Mahadaay iyo deegaanka Buurane, waxaana markaas kadib magaalada galay ciidamada dowladda Soomaaliya oo duurka kazoo baxay.
Horay ayay Alshabaab sidaan oo kale u weerareen Mahdaay hase ahaatee xilligaas ciidamada dowladda ayaa iska caabiyey. Mahadaay ma joogaan ciidamada AMISOM ee garab siiya ciidamada Soomaaliya.